Rolling Release Kugoverwa: Kubatsira uye Kukanganisa | Kubva kuLinux
Rolling Regedzera Kugovera: Kubatsira uye Kukanganisa
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Kugoverwa, Yakurudzirwa
Muverengi akatibvunza pano KubvaLinux ngatitaurei nezve Kugoverwa Kutenderera Kuburitswa, ndezvipi zvakanakira nekuipira, saka heino ichi chinyorwa chekutaura zvishoma nezvenyaya iyi.
Fungidzira tai riri pamota kuti parinofambira mberi, panzvimbo pokusakara, rinovandudza nekusimbisa rabha pasina kuchinjirwa chero chikonzero. Zvino ngatichinjei mota yerabha ne Kugoverwa kweGNU / Linux uye rabha pamapakeji ayo.
Kuti unzwisise zvishoma izvo iyo Kutenderera Kuburitswa, ngatitore semuenzaniso Ubuntu (izvo zviri pachena kuti haina chimiro ichi). Ubuntu ine kuburitswa kweshanduro nyowani mwedzi mitanhatu yega yega. Iyo ndiyo inonzi kugovera Kusunungurwa Kwenongedzo, uko mapakeji anosunungurwa nguva nenguva.
Munguva iyoyo yenguva, pane marathon yekuvandudza emapakeji nyowani eiyo vhezheni vhezheni, uye nekudaro tinogona kupa matatu matambudziko:
Isu tinofanirwa kushandura repositori yega yega mwedzi mitanhatu.
Kuisa kana kugadzirisa pane iyo vhezheni yatove yakaiswa kunogona kukonzera kukanganisa kana kuunza matambudziko.
Mapakeji kubva mushanduro yapfuura ari kukurumidza kuve echinyakare.
Ndokusaka inogara ichikurudzirwa kuita yakachena kuisa, kubva pakutanga, kunyange hazvo kazhinji vakanyanya kubatwa vashandisi vane versionitis syndrome. Saka chii chinoita distro Kutenderera Kuburitswa?
Ngatitorei Archlinux semuenzaniso. Mushandisi anoisa Archlinux kwenguva yekutanga uye haufanire kudzoreredza kunze kwekunge uine dambudziko rakakomba nesystem yako. Paunenge iwe ukaisa ese mapakeji iwe aunoda, sezvo achigadziridzwa neshanduro nyowani, iwe uchafanirwa chete kugadzirisa iwo kubva kumatura, kusanganisira system mapakeji senge Kernel.
Kupfupisa nemuenzaniso wakapusa. In Ubuntiwe kana ukashandisa Gnome2 game Natty, iwe unofanirwa kuisa Oneric (iyo yemberi vhezheni) kukwanisa kushandisa Gnome3. En Archlinux, kana iwe ukaiisa uchishandisa Gnome2, nekungovandudza (pese painowanikwa pachena) unogona kuisa Gnome3 pasina kudzoreredza sisitimu uye ndozvatinodaidza Kutenderera Kuburitswandiko kuti, kugovera kuri kuburitsa zvigadzirwa zve software izvozvi.
Uchagara uine mapakeji azvino anowanikwa.
Hapana chikonzero chekuisazve Operating system kuva nemapakeji nyowani.
Kana pasuru ine Bug, iyo nekukurumidza iyo inogadziriswa, iyo inokurumidza iwe kuiisa iyo nemhinduro.
Kuva neazvino software kunogona kupa zvisingaenderane matambudziko ekuvimbika kana zvikanganiso (kunyange izvi kazhinji zvisingawanzo).
Kana iko kugovera kusingasunungure zvinyorwa zvinoteverwa ne .iso kuisirwa, isu tichafanirwa kugadzirisa huwandu hukuru hwepakeji.
Muenzaniso wekugovera Kutenderera Kuburitswa mwanakomana Gentoo, Arch, Kahel OS, Chakra, sabayon, Kufanoona Linux. Uye mumwe muverengi anogona kushamisika Uye LMDE hazvisi Kutenderera Kuburitswa?
Con LMDE chinhu chinoda kuziva chinoitika. Kugoverwa uku kwakavakirwa pa Kuedzwa kweDebian kuti kunyangwe ichiratidzika kunge ine zvainoita tikaisa, Chaizvoizvo, hazvisi. Kuti tinzwisise izvi zvishoma, ngatitarisei kunobva.list mutsara we Kuedzwa kweDebian:
Ose ari maviri pari zvino anoshandira bazi Testing de Debian. Dambudziko nderekuti, kana tikashandisa yekutanga, riini Wheezy kugadzikana, hatingazoshandisi Testing. Nekudaro, kana tikashandisa iyo yechipiri, tichagara tichishandisa iyo vhezheni Testing chinja.
Mhedzisiro ye tikaisa iri mukati Kuedzwa kweDebian yeiyo yakapusa chokwadi kuti mapakeji anovandudzwa zuva rega rega, uye pese patinoshandisa Testing hatifanirwe kudzoreredza sisitimu. Asi mutsauko ndewekuti, Kuedzwa kweDebian ingo gadziridza mapakeji azvino uno akawedzerwa muzvinyorwa zve bazi iri, izvo zvisingatombofanirwe kuve mune yazvino vhezheni yakaburitswa nenjodzi yayo.
Ngatitore semuenzaniso zvakare Gnome. En Kuedzwa kweDebian mapaketi e Gnome 3.0 y Gnome 3.2, asi zvakasiyana, kwete iyo Desktop Nzvimbo izere. Pamwe kana iro bazi reSid richishandiswa, mhedzisiro tikaisa uve nani zvishoma, asi hazvikurudzirwe. Asi ngatidzokerei ku LMDE iyo ine zvinyorwa zvitsva zvepamutemo, uye zvichienderana neyatinoshandisa, tichava nekunzwa kuti ndizvo tikaisa o kwete.
Zvisinei, ndinovimba ndatsanangura zvishoma nezvenyaya iyi. Nekudaro, kana iwe uchifunga kuti ndiri kushaya chimwe chinhu, kana kuti ndiri kukanganisa, siya mhinduro yako 😀
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Rolling Regedzera Kugovera: Kubatsira uye Kukanganisa
Izvi ndizvo zvinonzi Kugoverwa kwePoint Release
Hakusi kuburitsa bhasikoro here?
Kana iko kugovera kusinga vhure zvigadziriso zvichiteverwa nekumisikidzwa .iso, isu tinofanirwa kugadzirisa huwandu hukuru hwepakeji.
Uff, iri idambudziko raunopenga. Chinhu chimwe chete chaunogona kuita uchigadzirisa kutora kufamba nemusikana wako, kana neKZKG ^ Gaara uye anotsanangura kuti Arch ndiro gehena rehahaha
Kuburitswa kwenongedzo, kuburitsa bhasikoro ... ivo vanonziwo Frozen
Pindura kuna jdgr00
Ndinomuziva sa Kusunungurwa Kwenongedzo.
Yup ... iyo ipfungwa isina kunaka, kunyangwe pakupedzisira haina musoro, nekuti seRolling rakafanana, iyo ISO yaizomiswa nekukurumidza 😉
... Uff, iri idambudziko raunoshusha. Chinhu chimwe chete chaunogona kuita uchigadzirisa kutora kufamba nemusikana wako, kana neKZKG ^ Gaara uye anotsanangura kuti Arch ndiro gehena rehahaha
hahahahahahahahaha ndakaseka ipapo…. Hahaha
Izvo zvakakoshawo kutaura kuti kazhinji iwo maRolling vhezheni haaverengerwe ... semuenzaniso Arch ingori Arch, hapana Arch 10.04 kana Arch 10.10 seUbuntu ... ..asi zvinongova kazhinji, nekuti semuenzaniso Sabayon anoita vane manhamba (7 achangobuda) asi iko kutenderera
Chaizvoizvo, kunyangwe vachigona kuverengwa, kungo tsanangura mamwe akakosha macircuit. Asi zvakadaro, uri kutaura chokwadi.
Kujekeswa kwakanaka, ini ndaisaziva izvi kubva kuSabayon. Mufananidzo (zvichibva paArch) zvakare haina vhezheni, handiti? Asi ... kwete iyo Chakra Project inayo?
Kwaziso nekutenda nekuda kwemashoko ako 😀
Chakra hongu, asi ini ndinonzwisisa kuti haisi kutenderera, iri hafu yekuumburuka
Musiyano upi zvaunoita? Iri Kupeta 😛
Ushingi ndizvozvo iri hafu yekuumburuka, haisi kuumburuka. Iwo matsva mavhezheni anotanga kupfuura nepasina kugadzikana repo uyezve kuyedza.
Chakra iri kutenderera, iyo kuverenga kwayakaita ndeyezvishoma, ndiko kuti, yemufananidzo uchangoburitswa weiyo nyika mune iyo distro iri kusarudza nguva ...... panguva ino ndiyo yaSeptember vhezheni ndosaka Chakra inoti 2011.09 (edn zita). Zvisinei, Chakra inoedza kuchengeta yayo .iso yakavandudzwa, kuitira kuti mukumisikidza nyowani haifanirwe kugadzirisa zvakanyanya
Ah hongu, zvakafanana nemubereki wayo distro: Arch 🙂
Kutenda nekujekeswa 😉
Chinyorwa chakanakisa, chinodzinga zvizhinji zvezvandinonetseka zvine chekuita nekuparadzirwa uku; pamwe gare gare edza rombo rako ne arch.
Kwazisai uye nekutenda neruzivo urwu, zvinonyanya kubatsira kune vatsva vakaita seni.
Kwete zvachose, mufaro kuziva kuti tinokubatsira.
Kwaziso uye kugamuchirwa kunzvimbo yedu inozvininipisa 🙂
Ndanga ndiri mushandisi weSuse, Fedora, Opensuse, Mandrake, Mandriva, Ubuntu, Debian, Linux Mint, Gentoo,…. uye ArchLinux, uye kubva pane ruzivo mu distro rolling kana chero chaunoda kuti chidaidzwe, ini handina kana matambudziko ekutsamira, kutaura zvazviri ndakave nematambudziko akawanda ekuvandudza kubva kune imwechete Ubuntu nhevedzano kuenda kune imwe pane kuArchLinux, kwandiri ini, semuenzaniso. . Nehurombo kana Ubuntu isina kuburitsa vhezheni yega yega mwedzi mitanhatu, pangave pasina nhau nezve iyo nyowani vhezheni, uye zvaisazove zvakadaro "POPULAR", uye pachinyorwa ini handisi kuzvishora, inongova nzira yekuzvisimudzira pachayo ( kushambadzira kwakachena), ndinotaura nekuti mumaBlog hapana chimwe chinopfuura kuverenga, kuti kana Oneiric yasara mazuva X, kuti kana yakatotanga, kuti kana iri mubeta, ndinofunga ndinozvitsanangura handiti?
Icho chiri chechokwadi ndechekuti ivo vanofanirwa, mumaonero angu, kuisa nzvimbo shanduro zvishoma nepakati, semuenzaniso imwe uye kwete maviri gore rega rega (ndiyo maonero angu).
Vazhinji vanoti nekuda kwekuti vari Rolling ivo havana kugadzikana, asi chokwadi ndechekuti ruzivo RWANGU rwakandiudza zvinopesana, ini ndinopa kushomeka kushoma neArch pane zvandaive nazvo muUbuntu, kana muDebian apo Testing yaive Squeeze.
Ehe ichokwadi, Ubuntu nehuremo hwayo hupfupi hwekutenderera unogara uchikwezva kutarisisa kwakawanda, izvo zvisingatombondinetse kana kufanana neni ... huya, handina basa 🙂
Ah nenzira, WELCOME kune yedu saiti 😀
Kutenda nekugamuchira uye kwaziso
Neichi ndinovimba muverengi wedu (Jesu) anofara 🙂
Nenzira, kana mumwe munhu achida chimwe chinhu chakanangana kuti chikurukurwe, ivo vanogona kutiudza kuburikidza nefomu redu rekubatana: https://blog.desdelinux.net/contactenos/
Ndotenda zvikuru ! Chinyorwa ichi chakandibatsira zvakanyanya.
Tinokutendai nekusvika nekusimudza mibvunzo yenyu mune zvese zvatinogona, tichagara tichibatsira.
Mhoro. Rega ndibvunze mubvunzo. Basa rakanaka neblog.
Ndeapi DEBIAN Rolling Regedza kugovera aripo? Ndinoreva izvo zvakagadziriswa nechimwe timu, seCanonical.
PS: uye sezvo isu tiri ... uye Fedora?. Kuedzwa kweDebian 6 kwaizosanganisira Gnome 3 yatove…. Zvingave zvakagadzikana here padanho reUbuntu? Ndiko kuti ndiri kutarisira kuvhura Ubuntu nekuti zvese zvavari kuita zvakanangana nekubatana, uye ini handizvimedze.
Mhoroi, kana ndakanganisa, vakomana vanondiruramisa asi LMDE chimwe chinhu senge inotenderera tune Debian tune, chimwe chinhu chingafadze iwe ndiDebian CUT, heino chinyorwa nezve icho chakanyorwa nechikwata cheichi blog https://blog.desdelinux.net/disponible-snapshot-debian-cut-2011-10rc1/
yep ... .LMDE ingori Debian Kuedzwa neunyanzvi hwevaLinux Mint vagadziri… ivo vanotora debian Kuedzwa vanoisa iyo mint-updater, iyo mint-menyu, iyo gtk theme, iyo Wallpaper uye voila… .muchipfupi ivo vanongo gadzira iyo. ona zvakanakisa, asi ivo havaite chero chinhu chakakosha kwaari. Kana iwe ukatora yako debian woisa iyo imwechete Wallpaper uye gtk theme iwe unotova neLMDE hehe asi nekudada kuti kwakachena Debian xD
akatsiga padanho rehunhu?
tarisa, Ubuntu chingave chimwe chinhu senge alpha vhezheni kana ichienzaniswa nekusimba kwaDebian, kudzikama uku kunoita kuti Debian ive yeanonyanya kushandiswa ma distros pane maseva
unoda kubvisa ubuntu here? Zvakanaka, ndinokukurudzira, hauzombozvidemba ... ndinogona kupota ndichikuvimbisa kuti hausi kuzodzokera kwaari
Ini ndinofungidzira iwe unonzwa wakanyanya maziso nekushandisa "yakachena" debian ...
Oops ... iwe uri chikamu che linux mint timu ... ndine hurombo, handina kuzvifungidzira ... asi tora sekushoropodza kunovaka iwe nevamwe vako ...
Yakanga isiri iyo chinangwa changu kuvakuvadza fungidziro yavo
Ah ndakanganwa ... ini ndanga ndisiri kuyedza kukanganisa chirevo chako, asi kuti nditsigire kuti iri vhezheni yakatarwa yedebian. Asi kupa maonero angu kuti inongogadzirirwa mune aesthetics, kwete mukushanda
Zvekare, ndine hurombo nekusanzwisisa
Mhoroi, ini handisi chikamu cheLinux Mint timu, ini handifarire fan fan comments.
Pindura kuna pmoscosoa35@gmail.com
Wow kubva pane zvandinoona Zvese pano zvinoshandisa Arch, GEnial
Ini zvakare ndinoshandisa Arch, yakanakisa muDistros. Ini ndapfuurawo akati wandei madistros, U, F, Man, D, OpnS, nezvimwe.
Pakutenderera Regedzera, Arch. Ha sezvo iri yega yega yandakamboshandisa
Circle Kuburitswa OpenSuse uye Fedora zvakanaka
KZKG ^ Gaara <° Linux akadaro
EYA !!!, kune vazhinji vedu vanoshandisa Arch ... haha, apa vazhinji vedu tine kuravira kwakanaka 😉
Kugamuchirwa kunzvimbo yedu, tinovimba kuti zvirimo ndezvaunofarira 😉
Kwazisai uye zvakare, gamuchirai 😀
Pindura KZKG ^ Gaara <° Linux
Kwete, hatisi tese tinoshandisa Arch ¬¬
Chokwadi, iyo yakasarudzika inoratidza mutemo
hehe, ikozvino kana iwe uchishandisa Arch, kunyangwe mumazuva iwayo elav aishandisa Debian.
Ah, inguvai iwe yaunofanirwa kuisa mari kuti uigadzirise, kutanga mukuburitswa kwepoint / kubhiza bhasikoro iwe unofanirwa kurodha pasi iso kubva ku cd / dvd. zvino panguva yekumisikidza vanokumbira kuti utore mamwe megabytes emafaira.
Zvino muRR inongoiswa kamwe chete, nekudaro iyo hombe kuvandudza pakutanga, haina kudzokororwa kunze kwekunge iwe waisa patsva, uye kana uchifanira kuisazve inyaya yekuti wakatanga kuyedza uye kumisikidza chimwe chinhu uye iwe haugone kana hapana nzira yekuirasa. kumashure. Makore anogona kupfuura asina kudzoreredza, nepo kuburitswa kwepfungwa / kubhasikoro iwe uchifanira kunge uchitsvaga isos yega yega 6, 8 kana gumi nemaviri mwedzi uye kana iwe uchikwidziridza, zvikasadaro inokupa zvikanganiso (kazhinji hazvina basa) iwe uchiri kufanira kurodha yakawanda mhedzisiro, iyo neRRs yaunotora iwe zvishoma nezvishoma. ndiko kuti, izvo "zvakashata" pachazvo hazvisi uye mune zhinji RR iwe unogona kuwana mimwe mifananidzo yazvino yeiyo isos.
Hoygan que buelbe centpre la vurra al gorosi nezvinhu izvi.
Zvinonzwisa tsitsi sei kuti waita mutsara uyu kubheja pane hoygan ¬¬
Mubvunzo unouya kwandiri, ini ndanga ndichiverenga izvo zve sabayon 8 uye inotaura chimwe chinhu nezve kunyanyisa-kuburitsa-kuburitsa, zvinorevei izvo pfungwa? Ndatenda pamberi asi ndirikuda kuziva, nenzira, peji hombe, ndinorida
Tsananguro yacho yaive yakakwana, zvakandibvisa kunze kwekusahadzika.
truko22 (@ truko222) akadaro
Chakra iri hafu kutenderera tarisa izvi zvinongedzo ^ __ ^
(http://chakra-linux.org/wiki/index.php/Chakra_Linux) uye (http://chakra-project.org/bbs/viewtopic.php?id=7091)
Pindura truko22 (@ truko222)
Ini ndinoshandisa Jagger edition, tsime rinotenderera… kutenderera dombo distro. 🙂
Kufanana nevazhinji venyu, ndakapfuura nemumastros akawanda kubvira kwandakatanga muLinux, uye kubva pandakawana "Chakra Linux", ndinofadzwa neiyi distro, kudzikama kunoshamisa, handina kana matambudziko mune chero matatu emuchina mu iyo iyo yandaisa, 3% inoshanda yekuonekwa kwehardware (kuonekana nematambudziko angu neBroadcom 100xx yangu), zvinowedzeredzwa, nezvimwe ...
Uye zvakare, iyo Bundles system inokutendera iwe kuve nechero GTK kunyorera uye maCCR, mazhinji eaya asiri mumahofisi epamutemo. Zvakare iyo nyowani-basa «Dharma» inonakidza !!!
Pamwe mangwana, ndine ruzivo rwakawanda (uye kushinga kwakawanda, wadii kuzvitaura) ndinotya neArch, asi parizvino ndiri kugara naChakra.
Pindura kuna Ramon
Ini ndinoshandisa ManjaroLinux, ichibva pane arch (ndokuti, ini ndirikutanga kuyiyedza) nemoyo wese, ndaida, nekukurumidza, nyore uye pamusoro pezvose zvinowedzeredzwa.
+100 yechinhu chacho.
hesi Ini ndaida kuziva kuti zvakafamba sei neManjaro. Ini ndinonyatsoda kushandura linux 12, kwete chero chinhu chakakosha nekuti yangu yekutanga distro ... sezvaungaona, ini ndiri huku mune iri bhizinesi reLinux uye ndiri kungowana iyo hang yacho yacho.
Ndakaverenga zvinhu zvakanaka nezveManjaro neLinux Mint, saka ndinoda maonero ako pakusimba, kuenderana nezvirongwa nezvimwe zvakadaro
Kune zvakare Software Center muUbuntu yanga ichindibatsira kwazvo uye ndinoda kuziva kana paine mune ese ma distros
ndatenda nekuterera kwako
Pindura kuna yoshy
Ini ndinowana iro dambudziko rekutadza zvikanganiso kuva rakasimba kana uchigadzirisa nyowani mapakeji, ini handizive kana iwo asina kuyedzwa nenzira kwayo usati waasunungura iwo kana iwo mhando yekudzora yakaderera. Ini ndakasiyana mune izvo "zvinowanzoita kunge zvisina kujairika", takawana mumaforamu eArch neManjaro akawanda ezvinyorwa pamusoro pazvo. Ini ndinosvetuka zvakanyanya neManjaro inoshambadzira iko kusununguka kwekushandisa, asi kana iwe uine dambudziko rekutsamira uye usiri mushandisi anofarira kupinza zvakadzama muhurongwa, chinhu chiri nyore kudzosera.
Ini ndinowana iyo Ubuntu yekuvandudza modhi yakanyatsogadzikana uye yakagadzikana, uye ona kuti kana ini ndisingade chero distro, iri chaizvo orange.
Ini handioni pfungwa yeRR panguva ino, haina kukura zvakakwana kana kuti zvimwe ini ndiro dambudziko.
shamwari ini ndinofunga icho chinyorwa chakabiwa:
Ini ndinotora mukana uye ndokubvunza iwe, ndanga ndichishandisa Linux mint 14 kwenguva yakareba, asi ndine bhagi randisingakwanise kugadzirisa, saka ndiri kufunga kutamira kune kuburitswa kuburitswa, kutya kwangu kunogona kuitika matambudziko neangu Hardware uye / kana zvigadzirwa
Ndinotenda mazwi ako
Kune akati wandei, semuenzaniso PCLinuxOS
Maitiro ekuwana iwo murairo iwe wawakapinda mune terminal